नेपालमा भर्खर फोरजी इन्टरनेट चल्दैछ चीनमा सिक्सजीको तयारी सुरु, यस्तो हुनेछ सिक्सजी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपालमा भर्खर फोरजी इन्टरनेट चल्दैछ चीनमा सिक्सजीको तयारी सुरु, यस्तो हुनेछ सिक्सजी
बेइजिङ। चीनले इन्टरनेट डाटा ट्रान्सफर प्रविधि फाइभजीबाट पनि अघि बढ्दै सिक्सजीको तयारी सुरु गरेको छ । नेपालमा भने फोरजी प्रविधि भित्रिएकै धेरै समय भएको छैन । यहाँ फाइभजी पनि आएको छैन तर चीनमा भने सिक्सजीसमेत आउने भएको हो । चीनको सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग काम गरिरहेको फाइभजी वर्किङ ग्रुपका अनुसार २०२० सम्म सिक्सजीको परीक्षण सुरु हुनेछ ।
२०१९ मा चीनको पूरा ध्यान देशभर फाइभजी प्रविधिको विस्तारमा केन्द्रित रहनेछ । यसको लागि देशभर साढे ३ लाख नयाँ टावर स्थापना गरिएको छ । अहिले नेपालमा चलिरहेको फोरजी प्रविधिलाई फाइभजी बनाउने हो भने अहिलेको इन्टरेटको गतिलाई २५ देखि ३० गुणा बढाउन सकिनेछ । सिक्सजी प्रविधि फाइभजी भन्दा पनि ३० गुणा छिटो डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्षम हुनेछ । सिक्सजीको लागि काम सुरु भइसकेको छ र यसको परीक्षण सफल भएमा चीन सिक्सजी प्रविधि भएको संसारकै एकमात्र देश बन्नेछ । सिक्जी प्रविधिमा मेगाबाइट प्रतिसेकेण्ड वा गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड मात्र नभइ टेराबाइट प्रतिसेकेण्डको गतिमा डाटा ट्रान्सफर हुनेछ ।